Citizen Alert ZA: Officials pilfer billions in Zimbabwe diamonds: report
Officials pilfer billions in Zimbabwe diamonds: report
VICTORIA FALLS, Zimbabwe — Around $2 billion worth of diamonds have been siphoned out of Zimbabwe in the past four years by a network of government ministers and military officials aligned with President Robert Mugabe, an Ottawa-based global watchdog said on Monday.
"Conservative estimates place the theft of Marange goods at almost $2 billion since 2008," Partnership Africa Ca
nada (PAC) said in a report that coincided with the start of an international diamond conference held to boost Zimbabwe's diamond sector.
"He has solicited and approved applications from members of Zimbabwe?s security forces, including those implicated in human rights abuses in Marange," the report added.
But the PAC report 'Reap What You Sow: Greed and Corruption in Zimbabwe's Diamond Fields' said: "Hundreds of millions of dollars owed to Zimbabwe?s treasury have been lost in both illegal and legal trades."
Chaim Even-Zohar, president of the Tel Aviv-based diamond consulting service Tacy Limited, said that Zimbabwe has the potential to produce eight to 10 percent of global gem production but was not benefiting fully as potential buyers were worried about trading with the country.
He said that while Zimbabwe complied with the Kimberley Process Certification Scheme, "major companies are scared, (and) insurance companies are afraid" of the US Office of Foreign Assets Control, forcing the country to dispose of its gems at 25 percent less than their full value.